Football Khabar » अर्जेन्टिना भर्सेस उरूग्वे : प्लेइङ–११ मा को–को ?
अर्जेन्टिना भर्सेस उरूग्वे : प्लेइङ–११ मा को–को ?
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलअन्तर्गत आज राति दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रका दुई बलिया टोली अर्जेन्टिना र उरुग्वेको रोमाञ्चक खेल हुँदैछ । खेल इजरायलको टेल अभिभ सहरस्थित ब्लुमफिल्ड रंगशालामा नेपाली समयअनुसार राति (मंगलबार बिहान) ठीक १ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आजको खेलमा अर्जेन्टिनी प्रशिक्षकले यसअघि ब्राजिलविरुद्धकै टोलीलाई पहिलो रोजाइका राख्ने सम्भावना छ । यसअघि बेन्चमै सीमित भएका सर्जियो अगुएरो र पाउलो डिबालाले दोस्रो हाफमा भए पनि खेल्ने प्रशिक्षक लिओनल स्कालोनीले बताएका छन् । अर्जेन्टिनाले यसअघि ब्राजिललाई १–० ले हराएको थियो । यता, उरुग्वेले भने यसअघि मैत्रीपूर्ण खेलमा हंगेरीलाई १–२ ले हराएको थियो ।
अर्जेन्टिनाको सम्भावित ११
गोलकिपर – इस्टेबान आन्ड्राडा (गोलकिपर), जाउन फ्योत, जर्मन पेज्जिल्ला, निकोलास ओटामेन्डी, निकोलास ट्याग्लियाफिको (डिफेन्डर), लुकास ओकाम्पोस, रोड्रिगो डे पाउल, लियान्ड्रो पाराडेस, जिओभानी लो सेल्सो (मिडफिल्डर) लिओनल मेस्सी, लौटारो मार्टिनेज (फरवार्ड)
उरुग्वेको सम्भावित ११
फर्नान्डो मुस्लेरा (गोलकिपर), अल्भारो गोन्जालेज, डिएगो गोडिन, सेबास्टिएन कोआटेस, माटियस भिना (डिफेन्डर), ब्रायल रोड्रिग्वेज, बेन्टाकुर, फेडे भाल्भर्डे, ब्रायन (मिडफिल्डर) लोजानो, इडिसन काभानी, लुइस स्वारेज (फरवार्ड–विंगर)
प्रकाशित मिति २ मंसिर २०७६, सोमबार १४:४८